E-News Nepali || Fast and Accuracy » जनताले तिरेको करबाट भात , भत्ता र कुर्सी पड्काएर तीनै जनतालाई पाखे भन्न लाज लागेन?
उक्त कार्यक्रममा उनले कुलमान घिसिङका कारण नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्नेहरुलाई पाखेको संज्ञा दिएका थिए। पत्रकार धमलालेले कुलमानजीकै कारण नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो नि ? भनेर प्रश्न सोध्दा थापाले त्यस्तो बताएका थिए। उनले भनेका थिए त्यसो भन्नेहरु पाखे हुन् । उहाँहरुको त्यो सन्तुलित विचार, बुझाई र दृष्टिकोण होईन् । साथै उनले कुलमान भगवान नभएको पनि बताएका थिए।
“कुलमानजी भगवान होईन, उहाँ मानिस हो । तपाईं मानिस हो । म मानिस हो । हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू मानिस हो । कुलमानजीपनि मानिस हो । जनताले सडकमा उत्रिएर भगवान भनेपनि हामीले भगवान भन्छौं त । हामी मान्छे हो ।”उनले भनेका थिए। यसरी जनतालाई पाखे भनेका कारण अहिले उनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक संजालमा उनी माथि गालीका वर्षात भइरहेका छन्।
प्रकाशित मिति ७ आश्विन २०७७, बुधबार १६:३४